Radio Masti 87.9 MHz धेरै भन्दा धेरै किताब पढ्ने बानीको विकास गरौँ
महिना मा कम्तिमा पनि एउटा किताब पढ्ने बानी बसालौं, आफ्नो अमूल्य समय त्यतिकै खेर नफालौं ।
अचेलका युवायुवतीहरु वास्तविक किताबहरु पढ्नुभन्दापनि फेसबुकमा झुन्डिन र युट्यूबमा आँखा जोड्डाउन मन पराउछन् । हुन त फेसबुक र युट्यूबले पनि ज्ञानगुनका कुराहरु नसिकाउने त हैनन् तर ती माध्यमहरुमा चाहिने र नचाहिने सबैथोक हुने भएकोले मन सजिलै बहकिन सक्छ । अझ युवाहरु को चञ्चल मन को त क कुरा गर्नु । त्यसैले इन्टरनेट को सहि सदुपयोग हुन सकेन भने समयको बर्बादी र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर हरु ले हाम्रो जीवन मा नकारात्मक असरहरु पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।
हामी अक्सर किताब पढ्न भनेपछि ह्या भनेझै गर्छौँ । जर्ज मार्टिनले भनेका छन् 'जसले पुस्तक पढ्छ, उसले मर्नुभन्दा अघि हजार जीवन बाँचेको हुन्छ भने जसले पढ्दैन, उसले केवल एक मात्र जीवन बाँचेको हुन्छ ।' किताब भनेको कोरा कागज मात्र हैन, यो त अथाह ज्ञान को भण्डार हो । संसारका जति पनि नामूद व्यक्तित्वहरु छन् उनीहरुले आफ्नो जीवन को धेरै जसो समय किताब पडनमा बिताउने गर्छन । विश्वकै धनाड्य बिल गेट्स भन्छन्, 'म एक वर्षमा करिब पचास जति किताब पढ्छु ।' यसर्थ उनले एक हप्तामा एउटा किताब पढेर सक्काउने गर्छन् । ती किताब हरुले उनको जीवनमा कस्तो परिवर्तन गरे होलान् त्यो उनको सफल जीवन बाट सजिलै थाहा पुन सकिन्छ ।
किताबको प्रकारले असर पार्ने भएपनि सरदर रुपमा भन्नुपर्दा एउटा किताब पढेर सक्काउन पाँच देखि दस घण्टा लाग्ला । आजकाल हामी दिनको कम्तिमा पनि दुई घण्टा फेसबुक र इन्टरनेट मा बिताउछौं । यसअर्थमा इन्टरनेटमा बिताउने दुई घण्टाबाट आधा घण्टा मात्रै समय भएपनि दिनको कुनै नयाँ किताबलाई दिन सकियो भने हामीले प्रत्येक पन्ध्र देखि बीस दिनमा एउटा किताब र एक वर्षमा कम्तिमा पनि बीसओटा नयाँ किताब पढेर भ्याउन सक्ने रैछौं । आजैबाट प्रयास गर्ने कि? अनि आफूले पढेर सक्काएको किताब आफ्नो साथीभाईलाई दिएर धेरै भन्दा धेरै पढ्न प्रोत्साहन गर्ने कि? सुरुवात आफै बाट गरौँ । समाज बदलिन समय लाग्दैन ।